WAR CUSUB: Wasaaradda qorsheynra iyo Iskaashiga Caalamiga oo Muqdisho ka furtay Shir y ka qeybgalaeen mas’uulayiin ka …. ( SAWIRRO ) – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 31st May 2016 069
Shir wada tashi ah oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka, oo ay ka qeybgalaeen mas’uulayiin ka tirsan Wasaardaha dowladda Federaalka, iyo xubno ka socday Qaramada Midoobay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, iyadoo looga hadlayay sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen wadamada soo koraya oo ay Soomaaliya qeyb ka tahay.
Mas’uulayiinta ka qeyblay shirka ee ka socday hay”adda South-South Cooperation oo hoos timaada Qaramada Midoobay iyo Wasaaradaha dowladda Federaalka ayaa la isku dhaafsaday aragti la xariiriira halka Soomaaliya ay iminka ka joogta arrimaha dhaqaalaha, wax soorka iyo teknoolijiyada, iyadoo xubnahii ka socday Jimiciyadda Qurumaha ka dhaxeysa ay aad u amaaneen horumarka ay Soomaaliya ay ka sameysay arrimahaasi.
Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Qorsheynta iyo iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdisiis Cabdi Diirshe oo Warbaahinta Qaranka la hadlay shirka kaddib ayaa sheegay in kulankan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay bulshada Soomaaliyeed, waxaana uu intaa ku daray inay joogteynayaan shirarka nuucaani oo kale ah.
“Shirkan waxa uu ku saabsanaa iskaashiga wadamada soo koraya iyo sida ay isaga kaashan lahaayeen horumarinooda, waxaana la aruurinayaa xog dhab ah oo ku saabsan xiriirada ka dhexeeya wadamada soo koraya, si wada jir looga wada shaqeeyo baahiyaha muhiimka ah, waxaana qorshuhu yahay in wadamada soo koraya ay ka xoroobaan kaalmada shisheeye” ayuu yiri Cabdisiis Cabdi Diirshe.
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo Muhiim ah oo Maanta ka dhacay Magaalada Cadaado ee Xarunta Galmudug+Sawirro
Beesha Sade oo shirweyne ku yeelagau Kismaayo. Maxaa ka so baxay?
admin 27th March 2016
Top: Ciidamada Jubaland Iyo kuwa AMISOM oo weerar ku qaaday Tuulada Beerxaani ee Gobolka Jubada Hoose.
Daawo: Taliyaha Cusub ee ciidamada xoogga dalka oo ka farxiyay askartii ku naafoowday 77-kii